Frantsa: Mipongatra Ny Tenim-paritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2012 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, Español, srpski, polski, 日本語, Italiano, Ελληνικά, Français
Ny 31 Martsa 2012, nisy hetsika nifanesy maro natao tany amin'ireo tanàndehibe tany Frantsa, voatariky ny tanjona hampiseho fanohanana tsy misy lesoka an'ireo tenim-paritra sy ireo tenin-janatany. Notanterahana telo herinandro talohan'ny fifidianana Filoham-pirenena Frantsay ireo fihetsiketsehana ireo ary nampiseho fandraisan'anjara mivaingan'ny vahoaka ho amin'ny fankatoàvana ireo tenim-paritra sy ireo tenin-janatany.
Niantso ny fampiarana ny Fifanekena Eoropeana ho an'ireo Tenim-paritra na Tenin'olom-bitsy [en] ireo mpandray anjara. Na voasonia tany Frantsa aza io fifanekena io tamin'ny 1999, dia tsy nampiharina mihitsy. Mangataka ireo mpifaninana ho filoham-pirenena handray fanapahan-kevitra mikasika ny tenim-paritra ireo fikambanana mandray anjara. Manomboka androany, raisina ho tsy manaraka ny lalampanorenana ireo tenim-paritra satria tsy mankatò ny fisian'ny olom-bitsy ny Fanjakana Frantsay.
Misy resaka politika – lalàna goavana mifamahofaho manoloana ireo teny ireo sy ny fankatoàvana azy noho ny fitsaram-bahoaka sy ny tsy fahampian'ny fahalalana ny raharaha. Misy mino fa an-dalam-piforonana ny fanovàna ny fomba fijery. Toa nanoritra ny lalana ho amin'ny famaritana toerana ho an'ireo teny ireo ho ampianarina any an-tsekoly ilay fanovana ny Lalàm-panorenana tamin'ny 2008. Nanakana izany fanantenana izany anefa i Nicolas Sarkozy izay nilaza fa hitondra amina fivoarana ara-poko izay tsy mifandrindra amin'ny firaisampirenena.
Solontenam-panjakana sy voafidy avy any amin'ny faritra maro no nanatrika ireo hetsika ireo, izay nampivondrona olona an'arivony tany Toulouse, Quimper, Strasbourg, Bayonne, Perpignan ary Ajaccio (Tenifotra ofisialy ao amin'ny Twitter: #op31m):
@fredverbeke: #Deiadar: mpanao fihetsiketsehana 7000 no manohana ny fampiasàna ofisialy ny teny Basque any Bayonne!!!! bit.ly/HvvCCx
@urtzai: Tohanan'olona miisa 12000 ny teny Breton, 8000 ny Katalana, 7000 ny #Euskara, 2000 ny Corse ary 30000 ny Occitan! #kolosala #deiadar
@elpasolibre: Oeh! 6 000 ireo namana any Perpignan, 12 000 ny any Quimper, 3 000 ny any Strasbourg, 30 000 ny any Tolozy, ary 7 000 ny any Bayonne #deiadar
@caillonm: Filaharan'olona eo alohan'ny fileovan'i Ajaccio ho fiarovana ny teny Corse. #op31M
Namoaka raki-tsarin'ilay fihetsiketsehana natao tany Tolozy i @la_setmana. Manome loharano betsaka kokoa ho fanampin'ilay topatopam-bitsika mivantana miaraka amin'ilay tenifototra #op31M ny bilaogy Langues régionales.
Namoaka ny sarin'ireo hetsika ny Méridianes, mampiseho ireo toerana samihafa sy ireo adihevitra nisy tamin'izany. Hatreto, manohana ny sata fankatoàvana ireo tenin'olom-bitsy i François Hollande (ilay mpifaninana avy ao amin'ny Antoko Sosialista) raha maneho ny fandàvany an'io tetikasa io kosa i Nicolas Sarkozy (UMP ary antoko mitondra ankehitriny) sy i Jean-Luc Mélenchon (antoko havia), manondro izany ny Solom-bavam-bahoakan'ny Finistère Jean-Jacques Urvoas ao anatin'ny bilaoginy:
Misokatra ny olana mahakasika ny satan'ireo tenim-paritra ary tsy mahakasika ireo mpifaninana ho filoham-pirenena fotsiny ihany izany. Mifangaro ihany koa ny tsikeran'ireo mpamaky ao amin'ny bilaogy Bigbrowser, taorian'ilay lahatsoratra nanambara ny fihetsiketsehan'ny 31 Martsa:
Xavi: Ny lanjan'ny tenim-paritra? Ho an'iza? Atao inona? Tsy resy lahatra aho fa tena ilaina ny fanomezana sata ofisialy an'ireo tenim-paritra rehetra. Miaina any Espaina aho ary vavolombelon'ny fandravaravana ateraky ny fampisarahana ara-pitenenana. Isaorana Andriamanitra, any Frantsa, ny Frantsay ihany no teny ofisialy.
ericparis11: Amina karazana tsikera toy izao, madiva hiteny amin'ireo Québécois isika hanary ny “roky”, ary hampiasa ny tenin'ny maro ao amin'ny firenena iainany, i.h. ny teny Anglisy ohatra.
Elg: Ah…Tenim-paritra! Izany fotodresaka mandrehitra ny nofinofy izany foana, mpamono amin'ny ankilany, mpanompo amin'ny andaniny!
thiziri: Ary rehefa tsy manana teny fototra manokana isika anatina faritra iray dia teny inona no ampiasaintsika? Na Basque, na Breton, na Katalana sns miaina miaraka amina vahiny, izay midika fa misy teny roa ao an-trano. Anatina sekoly inona no tokony ametrahantsika ny zanantsika?